Maxay sirdoonka Mareykanka uga dideen Donald Trump? - BBC News Somali
Maxay sirdoonka Mareykanka uga dideen Donald Trump?
20 Sebtembar 2019
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay eedeymo loo jeediyay oo ahaa in uu ballan qaad u sameeyay hogaamiyeyaal ajnabi ah. Arrintan ayaa buuq badan dhalisay, waxaana ay keentay in la dacweeyo Trump.
Wargeyska The Washington Post ayaa kusoo warramay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ay aad u dhibsadeen arrintan, ayna keentay inay ku wargeliyaan agaaismaha guud ee hey'adda.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal u ku beeniyayo arrintaas.
Xisbiga Dimuquradiga ayaa isku dayaya in dacwadda arrintaas la xiriirta ay u gudbiyaan Aqalka Kongreska, illaa iyo iminkana wax faahfaahin ah laga ma hayo dembiga la sheegay in uu galay Trump.
Agaasimaha hey'adda sirdoonka Michael Atkinson ayaa sheegay in dacwadani ay ku jiraan arrimo khatar ah iyo ku xadgudubka dhanka sharciga. Wuxuu sidoo kale sheegay inay xitaa ku jiraan macluumaad xasaasi ah.
Illaa iyo hadda lama garanayo cidda dacwadda gudbisay, hoggaamiyahaas ajnabiga ah ee uu Trump la hadlayay, ballanqaadkii uu u sameeyay, iyo haddii ballan qaad uu jiro bal inuu Trump dhaqan geliyay.
Hasayeeshee khubaro arrintan la socday ayaa wargeysyada kala ah the Washington Post iyo the New York Times u sheegay in dacwadda ay la xiriirto dalka Ukraine.
Dacwaddan ayaa la gudbiyay horraantii bishii Agoost, waxaana la sheegay in Trump u khadka taleefonka kula hadlay Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelenskyy laba asbuuc kahor.
Image caption Joe Biden
Saraakiil katirsan xisbiga Dimuquraadiga ayaa baaritaan ku waday Trump iyo qareenkiisa, Rudy Giuliani oo isku dayay inay cadaadis saaraan Dowladda Ukraine, si ay baaritaan ugu sameyso Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, iyo wiil uu dhalay oo horay uga tirsanaa guddiga shirkadda Gaas ee dalka Ukraine.
Joe Biden ayaa hadda doonaya in xisbiga Dimuqraadiga uu ugu tartamo doorahsada Madaxtinimada ee soo socota.
Trump ayaa khaamiistii aynu soo dhaafnay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu ogyahay in dhammaan taleefoonnadiisa dibadda ay dhageystaan saraakiisha sirdoonka.
"Iyadoo la ogyahay in taas ay jirto, ma jiraan dad aaminayo in wax aan munaasab ahayn aan u sheegay hogaamiye ajnabi ah," ayuu yiri Trump.
Ku simaha agaasimaha hey'adda sirdoonka Mareykanka, Joseph Maguire ayaa diiday in wax macluumaad ah uu la wadaago xildhibannada labada aqal ee Mareykanka, taas oo dhalisay caro ballaaran.
Guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee aqalka Kongreska, Adam Schiff ayaa bogaadiyay shakhsiyaadkii soo bandhigay arrintan iyo sida ay ugu dhiiradeen inay shaaciyaan.
Waxaa kale oo uu aqalka cad iyo waaxda cadaaladda ee Mareykanka ay isku dayayaan sidii ay u hor istaagi lahayeen in dacwadaas lala wadaago aqalka Kongereska.
"Waxaan aaminsanahay in uu jiro dedaal la doonayo in lagu hor istaago sidii macluumaadkaas uu u gaari lahaa Kongreska," ayuu yiri Mr Schiff.
Wuxuu intaa raaciyay inay u badan tahay in arrintan uu ku lug leeyahay Madaxweynaha ama dadka isaga ka agdhaw.
Trump iyo sirdoonka maxaa kala heysta?
Image caption Aqalka cad ee Mareykanka
Weriyaha BBC-da ee Aqalka Cad, Tara McKelvey ayaa sheegay in inta badan dadka la shaqeeya sirdoonka Mareykanka aysan ku aamin qabin Madaxweyne Trump, sidoo kalena ay aaminsan yihiin in uusan xafidi karin sirta qaranka.
Saraakiisha ayuu sheegay in aysan jecleysanin qaabka uu uga hadlo arrimahaas.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa marar badan baahiyay arrin ay sirdoonka Mareykanka u arkayeen mid xasaasi ah, waxaana u dambeesay sawir uu ku baahiyay baraha bulshada, kaas oo qaab sir ah uu dayax-gacmeed uga soo qaaday dalka Iran.